मयुरको प्वाँख घरमा राख्नाले हुन्छ यस्तो फलिफाप ! सेयर गरौ «
मयुरको प्वाँख घरमा राख्नाले हुन्छ यस्तो फलिफाप ! सेयर गरौ
Published : 26 January, 2020 10:10 pm
मयुरको प्वाँखलाई पुजनीय र पवित्र मानिन्छ । भगवान श्रीकृष्णले टाउकोमा सधैं मयुरको प्वाँख धारण गर्ने भएको हुनाले पनि धार्मिकतासँग मयुरको प्वाँख जोडिएको हो । मयुरको प्वाँख राख्नाले सौभाग्य ल्याउने धार्मिक विश्वास छ । वास्तुशास्त्रका अनुसार मयुरको प्वाँख घरमा राख्दा हुने फाइदाहरु धेरै छन् ।
जुन विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। यदी कुनै जरुरी काम पूरा हुँदाहुँदै रोकिएको छ भने आफ्नो बेडरुमको पूर्वीदक्षिण दिशामा मयुरको प्वाँख राख्नुहोस् । यसले रोकिएको काम पुरा हुनेछ । यदि तपाईको पैसा कहीँ अड्किएको छ अर्थात तपाईले ऋण दिएर उक्त ऋण उठेको छैन भने पनि मयुरको प्वाँख घरमा राख्नले ऋण उठ्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै घर अथवा पसलको दक्षिण–पूर्वी दिशामा प्वाँख राख्नाले घरबाट नकारात्मकता दोषहरु निवारण हुन्छन् ।
घरको मुख्य द्वारमा तीन वटा मयुर प्वाँख स्थापित गर्नाल, घरको वास्तुदोष निवारण हुन्छ। जो व्यक्तिले सधैं आफूसँग मयुरको प्वाँख राख्ने गर्छ, उसलाई हरेक काममा सफलता मिल्ने विश्वास गरिन्छ । किताब तथा डायरीमामयुर प्वाँख राख्नाले शुभ हुनेछ । कुनै पनि शुभ दिनमा मयुर प्वाँख घरको यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस्, जहाँ आउने जाने मान्छे सबैले देखुन् । यसले घरमा वैभवता छाउँछ भने घरमा हुने कलह रोकिन्छ । घरभित्र उत्पन्न हुने नराम्रा भावना निवारण हुने विश्वास गरिन्छ ।